कृषि/पर्यटन « News of Nepal
पाल्पामा पहिलोपटक लिफ्टसहितको होटल
पाल्पा, (नेस) पाल्पामा पहिलो पटक लिफ्ट प्रविधिसहित सुविधा सम्पन्न होटलको शुरूआत भएको छ। पाल्पा पर्यटकीय नगरी र सुन्दरताको परिचायक बनेसँगै यहाँ पर्यटकको आवागमन बढाउनका लागि होटलको शुरूआत गरिएको सञ्चालकले बताएका
स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनमा व्यस्त कर्णालीका कृषक
कालीबहादुर मल्ल, कालिकोट कर्णालीका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका किसान स्याउ बगैंचा र बिरुवा छाँटकाँट गर्न व्यस्त बनेका छन्। स्याउको बिरुवामा छाँटकाँट र मल तथा पानी दिन व्यस्त भएका हुन्।
स्याउ बगैँचा व्यवस्थापनमा ब्यस्त कर्णालीका कृषक
कालीबहादुर मल्ल, कालिकोट । कर्णाली अंचलका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका किसानहरु स्याउ बगैंचा र बिरुवा छाँटकाट गर्न ब्यस्त रहेका छन् । स्याउको बिरुवामा छाँटकाट र मल तथा पानी दिन
काठमाडौँ, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भनेर स्थापना गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा बोर्डबाट रकम लगेर आफ्नो संस्थाको वार्षिकोत्सव, अतिथि
‘माटोसँग खेल्दा आनन्द आउँछ’
प्रताप बानियाँ, म्याग्दी । जीवनमा सरकारी जागिर र विदेश यात्राको अनुभव नभएका मानिस कमै हुन्छन् । कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि पेशामा अधिकांश मानिसहरु लागेकै छन् । कृषि पेशालाई व्यावसायिकरण गर्ने
मौरी पालनबाट ३० लाख आम्दानी
सरिता चलाउने, माघ । जिल्लाको कालिमाटी गाउँपालिका वडा न ३ झिगानेका लोकेन्द्र वलीले मौरी पालेर वार्षिक ३० लाख भन्दा बढि आम्दानी गर्दै आइ रहेका छन् । विगत एक दशकदेखि व्यवसायिक
मुगुमा बेमौसमी तरकारी खेतिको अभ्यास
मुगु । मुगुका ग्रामिण भेगमा बेमौसी तरकारीखेतिका लागि परिक्षण हुन लागेकको छ । सामुदायिक बिकास कार्यक्रमले माटो सुहाउँदो र प्रयाप्त सिचाइको बयबस्था भएको ठाउँमा पलास्टिक घर निमाणर््ा गरी तरकारी उतपादन
कफी किसानलाई मोकुसाकु–ऐकी तालिम
अनिल खत्री, गुल्मी । कफी किसानलाई बिभिन्न रोगको समस्या आएसँगै गुल्मीमा एक दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । जाइका र चिया तथा कफी बिकास बोर्डको आर्थिक सहयोग र जिल्ला सहकारी
व्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दो
टंकराज अधिकारी, पोखरा । कृषिमा व्यवसायिकता तथा स्वस्थयकर तरकारी उत्पादनमा स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि पेशा, जीवनशैली लगाएत विभिन्न क्रियाकलापलाई वातावरण मैत्री बनाउन माछापुच्छ«े विकास संघले पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्घनको लागि
उत्पादन बढेपनि विक्रि नहुँदा बारिमै कुहियो अदुवा
सरिता चलाउने, सल्यान । सल्यानमा बिक्रि नभएपछि अदुवा बारिमा नै कुहिन थालेको छ । भारतमा निर्यात हुदै आईरहेको अदुवा भारतले निकासी बन्द गरेपछि किसानहरुले लगाएको अदुवा बारीमै कुहिन थालेको हो
खेती जोगाउन दिनरात चौकीदारी
हेमन्त पौडेल, कैलाली । छाडा पशुचौपायाले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली खाएर नष्ट पार्न थाले पछि कैलालीको किसानहरु हैरान भएका छन् । छाडा चौपायाहरुले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली र तरकारीहरु दिउँसो तथा रातीको
वडा कार्यालयको अगुवाईमा तरुलको ब्यबसायिक खेती
नेपाल समाचारपत्र, पर्वत । पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा पहिलो पटक तरुलको ब्यबसायिक खेती शुरु गरिएको छ । सुख्खा र भिरालो जमिन भएको वडा नं ७ लाई तरुल खेतीको पकेट क्षेत्रको रुपमा
सल्यानमाका कृषकहरु किवि खेति तर्फ आकर्षित
सरिता चलाउने, सल्यान । सल्यानका कृषकहरु किवि खेति तर्फ आकर्षित वन्न थालेका छन । किवि खेतिवाट राम्रो आम्दानी हुनथाले पछि सल्यानका विभिन्न ठाउमा किवि खेरी शुरु गरीएको छ । सल्यानको
कृषि संकलन केन्द्र स्थापना
अमृत अर्याल, स्याङजा । जिल्लाको वालिङ १४ मा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ । आजाद बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सहिद स्मृति भवनमा बसेको भेलाले कृषकहरुको सजहतालाई मध्यनजर गर्दै संकलन
सुन्तला उत्पादन वृद्धिगर्न विज्ञनै वगैचामा
सरिता चलाउने, सल्यान । सल्यानमा सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि गर्न विज्ञनै वगैचामा पुगेका छन । सुन्तला उत्पादनमा कमि आएपछि विज्ञहरुनै वगैचामा पुगेका हुन । प्रयोगात्मक विधिकोमाध्याम वाट सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि गर्नको
भँगरावासी व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका वडा नं. ९ भँगाराका कृषकहरु विगत चार वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा कफी खेतीमा लागेका छन् । खेतवारीमा अन्नवाली लगाउने जनशक्तिको अभाव र लगाएको
गाउँपालिका अध्यक्ष कृषिमा आफै नमुना
लित सिंह, बझाङ । सिंहदरवारले प्रयोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार समेत पाएको भनिएको स्थानिय तहका अध्यक्षको दैनिकी कस्तो होला ? धेरै जसो को उत्तर हुन्छ, ‘विहानै देखी सांझ सम्म भेटघाट,
मंगलबारे, इलाम, इलामको पशुपतिनगर नाकामा अध्यागमन केन्द्र नहुँदा बाह्य पर्यटकलाई समस्या हुने गरेको छ । भारतसँगको इलामस्थित मुख्य नाका पशुपतिनगरमा पर्यटकले लिनुपर्ने पर्यटक अनुमतिपत्र यहाँबाट प्रदान नगरिँदा बाह्य पर्यटकलाई समस्या
यस बर्ष लक्ष्य भन्दा बढि तरकारी वीउ उत्पादन हुने अनुमान
धनवीर दाहाल, रुकुम । रुकुम पश्चिमको समशितोष्ण तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र चाँपामा यो वर्ष लक्ष्य भन्दा बढि तरकारी वीउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । ९० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाईएको तरकारी
मह उत्पादन गरेर बार्षिक दश लाख आम्दानी दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । घर वरिपरि मौरीका घारैघार । घर अघि ठुलो सुन्तलाको बगैचा छ । बिहानै उठेदेखि साँझ नपरुन्जेल तीनै मौरीको घारको